सेयर बजार « GDP Nepal
काठमाडौं । कोरोनाका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरहेका बेला प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेका दुई कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण देखिएपछि थप १९ कम्पनीले साधारण शेयर बिक्री गर्ने
चन्द्रागिरीले १८ करोड ४० लाखको सेयर जारी गर्ने, लगानी कोषसँग सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडबीच स्थानीय बासिन्दा एबं सर्वसाधारणमा शेयर निस्कासन एबं प्रत्याभुति नियुक्ती गर्ने सम्बन्धी आइतबार सम्झौता भएको छ । चन्द्रागिरी हिल्सको १८ लाख ४०
काठमाडौं । सेयर बजार खोल्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारणदेखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ । अधिवक्ताहरु हरिप्रसाद दाहाल र रपीश पोखरेलले
काठमाडौं । लगानीकर्ताको चर्को दबाबपछि मंगलबार पूर्वतयारी सहित खुलेको सेयर बजारको ओपनिङ भने त्यति सुखद् रहेन । डेढ महिनापछि खुलेको सेयर बजारको पहिलो दिन के होला भन्ने धेरैको चासो रहे
एउटा ट्वीटको मूल्य कति ? टेस्लाका संस्थापकको ट्वीटले १४ अर्ब डलर नोक्सान !
अमेरिका (एजेन्सी): तपाइँ हामीले मनमा लागेको कुरा झट्ट ट्वीटर लेख्ने गर्दछौं र त्यसको कहिले वाहवाही आउँछ त कहिले आलोचना । माइक्रो ब्लगिङ भनिने ट्वीटरका २८० अक्षरभित्र धेरै मानिसका भावनादेखि सूचनासम्म
वैशाख २५ पछि सेयर बजार खोल्ने पक्षमा नेप्से
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले वैशाख २५ पछि सेयर बजार खोल्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले
घट्दो सेयर बजारमा राष्ट्रबैंकको नीतिले मलजल, लघुवित्तको लाभांशमा अंकुश !
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने लाभांशसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गर्दै कठोर बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयविपरीत मनोनित राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने भएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारमा पर्ने देखिन्छ । बुधबार
काठमाडौं । सेयर बजार संसारभर संवेदनशील हुन्छ अर्थात सानो घटनाको ठूलो प्रभाव रहन्छ । आर्थिक क्षेत्रको नीतिगत परिवर्तनमात्र नभइ राजनीतिक घटनाक्रमले पनि सेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिन्छ । नेपालमा अहिले
सनराइज बैंकको ऋणपत्र पूरै बिक्यो, ३ अर्बको बिक्रीसँगै राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूरा !
काठमाडौं । सनराइज बैंकले जारी गरेको सात वर्षे ऋणपत्र पूर्ण रुपमा बिक्री भएको छ । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निस्कासन गरेकोमा पूर्ण रुपमा बिक्री भएको जनाएको छ ।